सुरक्षा निकायलाई अझै सशक्त र कडा रुपमा परिचालन
www.bsgnews.com | National News | Mangshir 17
चुनावको मुखैमा एकपछि अर्को विस्फोटनको क्रम नरोकिएपछि सुरक्षा निकायलाई अझै &quot;सशक्त र कडा रुपमा&quot; परिचालन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
शनिबार गृहमन्त्रालयमा बसेको चारवटै सुरक्षानिकायको बैठकले हिंसात्मक गतिविधि गराउने समूह वा शंकास्पद व्यक्तिहरुको सम्भावित आश्रयस्थल तथा सवारी साधनहरुमा समेत निगरानी बढाउने निर्णय गरेको छ।
विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने समूहबारे सरकारको प्रष्ट नीति नभएका कारणले पनि सुरक्षा चुनौती थपिएको कतिपय सुरक्षाविद्को टिप्पणी छ।
दोस्रो चरणको प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचनका लागि जम्मा पाँच दिनमात्र बाँकी रहँदा विस्फोटन र विस्फोटक पदार्थ बरामद हुने क्रम वृद्धि भएपछि गृह प्रशासन आफू थप गम्भीर बनेको बताउँछ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीका अनुसार आइतवारबाटै सुरक्षा अवस्था थप सुदृढ बनेको परिणाम आउने गरी नयाँ योजना लागू गरिनेछ।
हामीले भनेको नयाँ सुरक्षा कारबाहीलाई परिणामले पुष्टि गर्ने कुरा हो। हाम्रो सुरक्षा कारबाही अत्यन्त सशक्त र कडा ढङ्गले अगाडि बढाउँछौं। जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा कुनै कसर बाँकी नराखिकन सुरक्षात्मक कारबाही गर्छौं। कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन्छौं
नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
उनले भने, ''हामीले भनेको नयाँ सुरक्षा कारबाहीलाई परिणामले पुष्टि गर्ने कुरा हो। हाम्रो सुरक्षा कारबाही अत्यन्त सशक्त र कडा ढङ्गले अगाडि बढाउँछौं। जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा कुनै कसर बाँकी नराखिकन सुरक्षात्मक कारबाही गर्छौं। कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन्छौं।''
विस्फोटनमा परेर हालसम्म एकजना म्यादी प्रहरी मारिनुका साथै कैयौं उम्मेदवार र मतदाताहरु घाइते भएका छन्।
तर एकजना पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले त्यस्ता गतिविधिबारेमा सरकारको स्पष्ट धारणा नआएका कारण पनि सुरक्षा परिचालनमा समस्या देखिएको बताउँछन्।
उनले भने, ''हिंसात्मक घटना गराउने जुन तत्वहरु छन्, त्यसमा नेपाल सरकारको नीति के छ त? यसबारेमा नेपाल सरकारले प्रष्ट रुपमा नभनिदिएको कारणले पनि सुरक्षा निकायहरुको जुन रणनीतिक कदम हुन्छ त्यो स्पष्ट छैन। यस अवस्थाले पनि चुनौती थपिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ।''
हिंसात्मक घटना गराउने जुन तत्वहरु छन्, त्यसमा नेपाल सरकारको नीति के छ त? यसबारेमा नेपाल सरकारले प्रष्ट रुपमा नभनिदिएको कारणले पनि सुरक्षा निकायहरुको जुन रणनीतिक कदम हुन्छ त्यो स्पष्ट छैन। यस अवस्थाले पनि चुनौती थपिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ
हेमन्त मल्ल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक
त्यसका अतिरिक्त सुरक्षा निकायबीच सूचना समन्वयमा समेत समस्या रहेको उनले बताए।
पहिलो चरणको तुलनामा बढी जनसंख्या भएका निर्वाचन क्षेत्र, खुला सिमाना भएका र ठूला नेता उम्मेदवार रहेको कारणले पनि आसन्न निर्वाचनमा सुरक्षा थप चुनौतीपूर्ण हुने कतिपयको विश्लेषण छ।
तर लुकिछिपी भइरहेका विस्फोटनका कारणले मतदातामा केही त्रास फैलिएको भएपनि त्यसलाई नियन्त्रणका लागि नेपाली सेनाको विशेष टोलीहरु थप सक्रिय पारिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी नैनराज दाहालले बताए।
उनले भने, ''हिंसात्मक घट्नाबीच नेपाली सेनालाई दिइएको म्याण्डेट अनुसार हामीले सुरक्षा निगरानी बढाएका छौं। यदाकदा विस्फोटनका घट्नाहरु भइरहेका भन् तर कतिपय ठाउँमा नेपाली सेनाले सफलता पनि हासिल गरेको छ। अब त्यस्ता घट्ना नहुन दिन हामी क्रियाशील छौं।''
बढ्दो सुरक्षा चिन्तामाझ शनिबारमात्रै केही स्थानमा भएका विस्फोटनका घट्नामा संलग्नबारेमा समेत प्रहरी बेखबर छ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार हालसम्म निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा ५६९ जना पक्राउ परेका छन्।
तीमध्ये झण्डै आधाजसो विस्फोटक पदार्थ तथा हातहतियारसहित पक्राउ परेका थिए।